Ukungasebenzisi amava aBantu akuVuselelayo | Martech Zone
Ukungasebenzisi amava aBantu akuVuselelayo
NgoLwesine, uJuni 18, 2015 NgeCawa, uJuni 21, 2015 Douglas Karr
Kwi-IRCE yalo nyaka eChicago, ndenze udliwanondlebe UDavid Brussin, Umsunguli weMonetate, kwaye yayiyincoko ekhanyayo kulindelo olulindelekileyo lwabathengi kunye namava abalindeleyo kubathengisi bobabini kwi-Intanethi nangaphandle. Ityala lokuzenzela liyakhula lomelele kwaye lisenokuba lifikelele kwinqanaba lokuncipha.
Kutshanje iMonetate Ingxelo yekota ye-Ecommerce ibonisa ukuba amaxabiso okuhla enyukile, amaxabiso e-odolo aphakathi aphantsi kwaye amaxabiso okuguqula aqhubeka ukwehla. Ukwenziwa komntu kunye novavanyo kuyayiphazamisa le meko… hayi ngenxa yezindululo ezilungiselelwe kodwa ngenxa yokuba iisayithi ezisebenzisa obu buchwephesha zifumana kwaye zigcina abathengi ngenxa yamava abathengi aphuculweyo.
Ingxelo yekota ye-Ecommerce ihlalutya isampulu engahleliyo engaphezulu kwe-7 yezigidigidi zamava okuthenga kwi-Intanethi kusetyenziswa ivenkile enye idatha kwikota nganye yekhalenda. Umyinge kuyo yonke ingxelo ubalwa kwisampulu iphela. Iimpawu eziphambili zomsebenzi, ezinje ngexabiso loku-odola ngokomyinge kunye nenqanaba lokuguqula, ziyahluka ngokwamashishini kunye nohlobo lwentengiso. Le mizinge ipapashwa kuphela ukuxhasa uhlalutyo kukhululo ngalunye lwengxelo, kwaye ayenzelwanga ukuba ibe ngumgangatho kulo naliphi na ishishini le-ecommerce.
Monate igunyazisa ukwenziwa kwamajelo amajelo amaninzi. Ujongano lweqonga leMonetate livumela abathengisi ukuba benze, bavavanye kwaye bathumele inani elingenamda lamava obujolise kubuntu bedijithali ngesidingo esilinganiselweyo se-IT okanye izixhobo zonxibelelwano kwiqonga lexesha lokwenyani.
Monate ye-imeyile Yenza i-imeyile yakho ibenakho kwaye uyiqhagamshele kumaphepha omntu owenzelwe ubuqu.
I-Monate yokuThengisa -Iingcebiso ngemveliso yobuqu kunye nokufaka iibheji
I-Monetate yeeNkqubo zeMfono -Ukuzenzela kunye nokuvavanywa kweapps zomthonyama.
Ubuntu beMonetate kunye neengcebiso ngokujonga konke
kunye I-Monetate yoKwenziwa komntuUnokwenza amava abathengi afanelekileyo kwiwebhu, i-imeyile, kunye neeapps ezihambayo. Uyakwazi ukwenza uluvo lwakho ngamava onke ngokuthenga ngokwenza iiasethi zohambo, iibhena, iibheji, amaqhawe, kunye nokunye. Izinto zedatha zinokudityaniswa kwiCRM yakho kunye nePOS kunye newebhu, indawo, indlela yokuziphatha kunye nedatha yesixhobo ukuphucula amava abathengi kwindawo yakho yonke.
I-ROI yokwenziwa komntu
Ngemiceli mngeni yokunyuka okwandayo kweemarike kwi-Intanethi kunye nokhuphiswano, ukwenziwa komntu ngokwasemthethweni akuboneleli ngembuyekezo kutyalo-mali kuphela, kuya kuba yimfuneko.
I-Kipling Kutshanje kukhutshwe igridi yengcebiso yemveliso kwiphepha lasekhaya kunye neMonetate. Nangona isisiseko kwaye iyodwa, inkampani iyithathile inyathelo ngokuqhubeka nokubekwa. Inguqulelo enye ibonakalise izindululo zemveliso phezulu ephepheni ngelixa enye inguqulelo ibonise iigridi emazantsi ephepha. Ngenxa yoko, iqela lonyuse ukuzibandakanya kwabathengi kunye nokuzimisela eyona ndawo ibalaseleyo yokufumana inqanaba lokuguqula.
Ngamaqondo okuguqula ama-7.29 epesenti kunye neepesenti ezingama-9.33 ngokwahlukeneyo, zombini zigqithile kumgangatho wokuqala wesiseko sokuguqulwa kwepesenti ye-1.64.
tags: UDavid brussinUmxholo onamandlaUkulungiswa kwe-imeyileukwenziwa kwe-imeyileyokufunda umatshinii-monetateUkulungiswaNgokwezifisoiingcebiso ngemvelisoulungiselelo lwesizaukuvavanywa kwendawoekujoliswe kuyo
Idlalwa njani i-Onboarding yeDatha ekuNcediseni ukuThengisa amajelo amaninzi
Ukuthengisa kunye nokuThengisa: Umdlalo woqobo weTrone